Sat, Jul 11, 2020 at 2:39pm
गण्डकी सरकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ४० नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने
दमौली, १७ जेठ गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ४० नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने भएको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न र पर्यटकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ४० वटा नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्न लागेको हो । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा नयाँ गन्तव्य खोजीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।..
“अब अमेरिकामा गएर छाती फुलाएर सगरमाथा चढेको छु भन्न सक्ने भएको छु”
दमौली, १६ जेठ । २२ वर्षअगाडि जब म अमेरिका गएँ मलाई त्यहाँका नागरिकले कुन देशबाट आएको भनेर सोध्थे । मैले नेपाल भनेर भन्थे । उनीहरुले फेरि सोध्थे, “नेपाल भनेको कहाँ छ ?” मैले उत्तर दिन्थे, “नेपाल भनेको सगरमाथाको देश हो ।” सगरमाथा चिन्नेहरुले फेरि प्रश्न गर्थे, “के तिमीले सगरमाथा देखेको छौ ? सगरमाथा चढेका छौ ?” मैले भन्थे, “अहँ चढेको छैन..
माओवादी आक्रमणबाट ध्वस्त पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयको भयो भव्य उद्घाटन
पाल्पा, १६ जेठ : ऐतिहासिक पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आएको छ । सङ्ग्रहालय सञ्चालनको करीब चार वर्षपछि उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटन समारोहमा प्रदेश नं ५ का सदस्य तुलाराम घर्तीले पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय प्रदेशस्तरीय सङ्ग्रहालय रहेकाले सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो । सङ्ग्रहालय प्रवेशमा प्रतिविद्यार्थी रु पाँच, स्वदेशी नागरिकलाई रु १५, सार्क देशका नागरिकका लागि रु ५० र अन्य विदेशी नागरिकका लागि रु..
तेञ्जिङ र हिलारीलाई बाटो देखाउने कान्छा शेर्पा भन्छन् : सगरमाथाको साख जोगाउनुपर्छ
सोलुखुम्बु, १५ जेठ । सन् १८४९ मा ब्रिटिस सर्बे अफ इण्डियाले सर्वेक्षण गरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने अग्लो शिखर भनी चिनिएको भए पनि यहाँका मानिसलाई केही थाहा थिएन । त्यसैले १०४ वर्षपछि बल्ल शिखरमा मानिसको पाइला पुग्यो । सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मेका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले दार्जिलिङमा पुगेर ट्रेकिङ कम्पनी खोलेपछि सोही माध्यमबाट एडमण्ड..
जलयात्रासँगै आयआर्जनको महत्वपूर्ण विकल्प बन्दै कालीगण्डकी
काठमाडौँ, १५ जेठ । धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी अब आयआर्जनको पनि दरिलो स्रोत बन्दै गएको छ । जैविक विविधताको खानी कालीगण्डकीमा पछिल्लो समय जलयात्राको माध्यमबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिने सम्भावना बढ्दै गएकोे छ । कालीगण्डकीको तल्लो भाग राम्दीदेखि देवघाटसम्म नियमित र्याफ्टिङ चलाउन कर्णाली र्याफ्टिङ एण्ड एड्भेञ्चरका विज्ञसहितको टोलीले सफल परीक्षण गरिसकेका छन् । सो परीक्षणपछि यो क्षेत्र पारिवारिक..
काठमाडौँ, १४ जेठ विगत डेढ दशकमा बाघ र अर्नाको सङ्ख्यामा लगभग दोब्बरले वृद्धि भई बाघको सङ्ख्या हाल २३५ र अर्नाको सङ्ख्या ४४२ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को आठ महीनाको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सन् २००० मा ६१२ गैँडा रहेकामा सन् २०१४ मा ६४५ पुगेको छ । सन् २०१२ मा २८५ कृष्णसार रहेकामा सन १०१३ मा ३०० पुगेको भए पनि त्यसपश्चात् क्रमशः घट्दै..
‘हिमालय पर्यटन सहकार्य’बारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबार, १० देशकाको सहभागिता
काठमाडौँ, १४ जेठ । नेपालमा पहिलोपटक ‘हिमालय पर्यटन सहकार्य’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिमालय पर्यटन सहकार्यको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एशोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा)को सहकार्यमा जेठ १५ गते उक्त सम्मेलन हुनलागेको हो । होटल याक एण्ड यतीमा हुने उक्त सम्मेलनमा १० देशका विभिन्न हिमाल क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता..
गणतन्त्र आए पनि खुलेनन् रत्नमन्दिर र हिमागृह, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पुरा होला ?
कास्की, १३ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटक वर्ष घोषणा गरेर १५ लाख स्वदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ । उसले सन् २०२० लाई छिमेकी मुलुकका पर्यटक भित्र्याउने वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ भने सन् २०२२ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक र बाह्य गरेर वर्षमा करीब १० लाख पर्यटक मात्र प्रदेशमा भित्रिरहेको अवस्थामा..
चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा १ सय ५० दिनसम्म निःशुल्क भिसा, ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो
काठमाडौं, जेठ १३ । नेपाल सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिले ‘समृद्ध नेपाल बनाऔँ, विश्वमा नेपाल चिनाऔँ’ तथा ‘गरौँ तयारी धुमधाम, पाहुनालाई गराऔँ घुमघाम’ भन्ने नारासहित स्टिकर सार्वजनिक गरिएको छ । सन् २०१६ देखि २०१९ को अप्रिलसम्म चिनियाँ पर्यटकबाट सरकारले १० अर्ब २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । यो..
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट केही आरोहीले ढुङ्गा बोकेर ल्याउँदा...
काठमाडौँ, १२ जेठ । राष्ट्रिय निकुञ्जका कुनै पनि वस्तु बिनाअनुमति कसैले लैजान पाउँदैन । यस्तै संवेदनशील क्षेत्र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट केही आरोहीले ढुङ्गा बोकेर ल्याउँदा अहिले कानूनी झमेलामा परेका छन् । हिमाल आरोहण गरेर काठमाडौँ फर्किंदै गरेका तीन जनालाई सगरमाथा क्षेत्रको ढुङ्गो बोकेर ल्याएको आरोपमा आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ । हुन त उनीहरुले चिनोका लागि भनेर पनि ढुङ्गा ल्याएको हुनसक्छ तर..
कति होला फोक्सुण्डो तालको गहिराइ ? विज्ञ टोली मापन गर्न डोल्पामा
डोल्पा, १२ जेठ डोल्पाको फोक्सुण्डो तालको गहिराइ पुनःमापन गर्न मौसम विज्ञान विभागले विज्ञ टोली खटाएको छ । नेपालकै गहिरो तालका रूपमा परिचित फोक्सुण्डो तालको गहिराइका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि पुनःमापन गर्नका लागि विज्ञ टोली पुगेको हो । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–८ रिग्मो गाउँमा अवस्थित फोक्सुण्डोको गहिराइ नाप्न १० जनाको विज्ञ टोली डोल्पा आइपुगेको छ । नेशनल हाइड्रोलोजिकल एण्ड मेट्रोलजिकल रिसर्च सेन्टर एण्ड कन्सल्टेन्सीले अनुमति..
सगरमाथामा ट्राफिक जाम : मृतकको संख्या १० पुग्यो, १ सय ५० मिटर तल खसे रबिन
काठमाडौँ, १२ जेठ । यस सिजनकाे सगरमाथा आराेहणका क्रममा १० जना आराेहीकाे मृत्यु भएकाे छ । शनिबार शिखरबाट ओर्लने क्रममा एक बेलायती आरोहीको मृत्यु भएसँगै मृतककाे संख्या १० पुगेकाे हाे । शनिबार सगरमाथाकाे शिखरमा टेकेर ओर्लन नसक्दा ४४ बर्षे रबिन हाइन्स फिसरको मृत्यु भएको हाे । उनकाे लडेर मृत्यु भएकाे सरकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । फिसर शिखरबाट १ सय ५० मिटर तल खसेको..
२४ पटक सगरमाथा चढेका कामीरिता भन्छन् : ‘यो मेरो प्यासन हो’
काठमाडौँ, ११ जेठ “सगरमाथा कति पटक चढ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न नसोध्नुस्, सगरमाथा चढिरहन्छु, यो मेरो ‘प्यासन’ हो”, सगरमाथाको २४औँ पटक सफल आरोहण गरेर फर्किएका कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पाले रासससँग भन्नुभयो । यही जेठ ७ गते २४औँ पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका आरोही शेर्पाले आज काठमाडौँ फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको स्वागतपछि संंिक्षप्त प्रतिक्रिया दिँदै सगरमाथा आरोहणलाई आगमी..
अधिकांश आरोही सगरमाथा शिखरमा, ६ सयले गरे आरोहण, एउटा मात्र रुट किन ?
सोलुखुम्बु, ११ जेठ । अदम्य साहस र धैर्यतालाई आत्मसात् गर्दै चुनौतीको चुचुरो चुम्न जब सफल हुन्छन् अनि त्यहाँ राष्ट्रियता झल्कन्छ । एकै याममा ६०० सय जनाभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । मे १४ देखि मे २४ सम्म उक्त संख्याका शेर्पासहित स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले सगरमाथाको आरोहण गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । यो संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने सम्भावना छ । ‘आधार शिविरबाट..
पाल्पा जिल्लास्थित प्रेमको प्रतीक रानीमहलको बृहत् सरसफाइ
रामपुर,१० जेठ पाल्पा जिल्लास्थित प्रेमको प्रतीक रानीमहलको बृहत् सरसफाइ गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणका रुपमा परिचित रानीमहललाई थप आकर्षक बनाउन नेपाली सेना गोरखदल गणका ४० भन्दा बढी सैनिक जवान, तानसेन नगरपालिका सरसफाइ शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, रानीमहलको सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीलगायत बिहीबार सरसफाइमा सहभागी भएका थिए । सेनाको टोलीले रानीमहलको प्रवेश क्षेत्रदेखि प्राङ्गण, महलको पानीपोखरी, महलको भित्री एवं बाहिरी क्षेत्रमा..
काठमाडौँ, ९ जेठ । सगरमाथा आरोहणको वसन्त ऋतुको याममा इतिहासकै सबैभन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको चुचुरो चुमेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यस याममा जारी हिमाल आरोहणका क्रममा आजसम्म ३५० भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार यस याममा सगरमाथा आरोहणका लागि ४४ आरोही समूहका ३८१ ले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सन् २०१८ मा ३८ आरोही समूहका..
चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका ५० ताल र पोखरीको स्तरोन्नति
भरतपुर, ९ जेठ वन्यजन्तुलाई खाने, बस्ने र आहाल बस्ने प्रयोजनको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुन्जले ५० ताल र पोखरीको स्तरोन्नति गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तालको सङ्ख्या बढाउने र व्यवस्थापनको काम गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जले यस वर्ष ७० पोखरी स्तरोन्नति र व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५० ताल र पोखरीमा काम सम्पन्न भइसकेको..
विश्वमै दुर्लभ मानिएको सुन गिद्ध र सेतो गिद्धले जाजरकोटमा चल्ला कोरल्यो
जाजरकोट, ९ जेठ । विश्वमै दुर्लभ मानिएको सुन गिद्ध र सेतो गिद्धले जाजरकोटमा चल्ला कोरलेको छ । यहाँको नलगाड नगरपालिका–५ पोखराको महादेवस्थान जङ्गलको सल्ली रूखमा लगाएको गुँडमा चल्ला कोरलेको हो । त्यस्तै विश्वमै दुर्लभ तथा लोपोन्मुख मानिएको सेतो गिद्धले बारेकोट गाउँपालिका–९ काप्तीको जङ्गलमा गुँड लगाएर चल्ला कोरलेको पक्षी संरक्षण सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं पशु प्राविधिक गोविन्दबहादुर सिंहले बताउनुभयो । दुई-तीन वर्षअघि सुन गिद्धले..
५६ वर्षीय गोपाल श्रेष्ठ बने पहिलो एचआईभी संक्रमित सगरमाथा आरोही
काठमाडौँ, ८ जेठ । एचआइभी सङ्क्रमित पोखरा, रत्नचोकका ५६ वर्षीय गोपाल श्रेष्ठले आज बिहान सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । उहाँ सगरमाथाको आरोहण गर्ने पहिलो एचआइभी सङ्क्रमित नेपालीसमेत हुनुभएको जिकिर गरिएको छ । उहाँले बिहान ८ः१५ मा सगरमाथामा पाइला टेक्नुभएको सगरमाथा आधार शिविरबाट सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पूर्वराष्ट्रिय फुटबल खेलाडी उहाँले ‘स्टेप–अप क्याम्पेन : सेकेण्ड फेज एभरेष्ट एक्स्पिीडिशन’(अभियान अघि..
सगरमाथा मापन टोली पुग्यो चुचुरोमा, को छन् व्यवस्थापन र नेतृत्वमा ?
काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापनका लागि नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभागले आफ्नै स्रोतसाधनबाट सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य अगाडि बढाएको हो । सगरमाथाको उचाइ नाप्नका गएको नापी विभागको टोली सगरमाथाको शिखरमा पुगेको छ । विभागको टोली बुधबार बिहान ३ः१५ बजे मा सगरमाथा शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । प्रमुख नापी अधिकृत..
नयाँ विश्व कीर्तिमान राख्दै कामिरिता शेर्पा २४ औँ पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा
काठमाडौँ, ७ जेठ । वसन्त ऋतुको यस याममा सगरमाथाको आरोहण गत वैशाख ३१ गतेदेखि शुरु भएको थियो । आरोहणको दोस्रो दिन यही जेठ १ गते कामिरिता शेर्पाले सगरमाथाको २३औँ पटक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो । कामिरिता फेरी २४औँ पटक सगरमाथा आरोहण छन् । उनी मङ्गलवार बिहान ६:३८ मा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका हुन् । सोलुखुम्बुको थामे गाउँका..
भक्तपुर जाने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन चुनौती : एक-दुई घण्टा बिताएर पानी, चिया र कफीकै भर
नगरकोट, ४ बैशाख । काठमाडौँबाट ३२ किलोमिटर दूरीमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नगरकोट आकर्षक गन्तव्य भए पनि पर्यटनको माध्यमबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । राजधानीको निस्सासिँदो वातावरणबाट रमणीय क्षेत्रमा पुगेर आनन्द लिने इच्छा कसलाई पो नहोला । त्यसको लागि उपयुक्त गन्तव्य नगरकोट नै हो । रमणीय वातावरण, डाडाँकाडा र त्यहाँबाट देखि हिमशृङ्खलाका मनोरम दृश्यले जोकोही आगन्तुकलाई सहजै आकर्षण गर्छ । दृश्यावलोकनका लागि..
हिमाल, बागलुङ बजारसहित काली नदीको मनोरम दृश्य नियाल्न भकुण्डे जाऔं
भकुण्डे, बाग्लुङ, ३ आफ्नै रहनसहन, जीवन शैली र संस्कृति बोकेको बाग्लुङ नगरपालकिा–१० स्थति भकुण्डेबाट सफा मौसम भएको बेला धौलागरि, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हमि शृङखलामा पर्ने झण्डै २५ वटा हमिाल नाङ्गो आँखाले देख्न सकन्छि । नेपालका बाइसे चौबीसे राजाका पालामै राजारजौटा आएर केही दनि बतिाउने यो रमणीय स्थल प्रचारप्रसारको अभावमा चर्चा आएको भने छैन । अत्यन्त उच्च ठाउँमा रहेर पनि ठाउँ ठाउँमा रहेका..
आफ्नै कीर्तिमान बारम्बार तोड्दै कामिरिता शेर्पा ! एक हप्तामै फेरी सगरमाथा चढ्ने घोषणा
काठमाडौँ, २ जेठ । साहसिक आरोही कामीरिता शेर्पाले २३औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरी सक्नुभएन गर्नुभएको छ । सोलुखुम्बु थामेका शेर्पाले बुधबार बिहान ७ः५० मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा २३औँपटक पाइला टेक्नुभएको आधार शिविरबाट पर्यटन विभाग पर्वतारोहण शाखाका नायबसुब्बा रामेश्वर निरौलाले जानकारी दिनुभएको थियो । कीर्तिमानधारी आरोही कामिरिता शेर्पाले अर्को हप्ता फेरि सगरमाथा चढ्ने बताएका छन् । कामिरिताले मङ्गलवार २३औँ पटक..
कञ्चनजङ्घा आरोहण : २ भारतीय पर्वतारोहीको मृत्यु, १ सम्पर्कविहीन
काठमाडौं, २ जेठ । कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्न गएका दुई पर्वतारोहीको मृत्यु भएको र एक जना सम्पर्कविहीन भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेहरू दुवै जना भारतीय नागरिक हुन् । सम्पर्कविहीन पर्वतारोहीको खोजी तथा मृतकहरूको शव तल ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। ठाडो उकालो भएकाले कञ्चनजङ्घाको शिखरमा पुग्ने बाटो अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ। त्यहाँ बारम्बार हिउँपहिरो पनि गइराख्छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको नेपाल र भारतको..
विश्वमै दुर्लभ चिरकालिज संरक्षणका लागि पहल शुरु
जाजरकोट, २ जेठ पछिल्लो समय विश्वमै दुर्लभ चिरकालिजको व्यापक चोरी सिकारी हुन थालेपछि संरक्षणको लागि पहल शुरु गरिएको छ । सामुदायिक वन समूह र सरोकारवालाले संरक्षणका लागि चासो नदेखाएपछि यसको चोरी सिकारी रोक्न वन तथा वातारणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा चिरकालिजलगायतका जङ्गली जनावरको संरक्षणका लागि चासो बढेको हो । कालिज साविकका नायकवाडा, रोकायगाउँ, रामीडाँडा, सक्ला, खगेनकोट, लहँ, रग्दा, भगवती, पैक, ढिमे, झाप्रा र..
को हुन २३औं पटक शिखरमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान कायम राख्ने कामीरिता ?
सोलुखुम्बु, १ जेठ । संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नाम हो सगरमाथा । विश्वका मानिसहरुको लागि सगरमाथा एउटा मनोरम सपना हो भने नेपालीहरुका लागि गर्व र पहिचान । साहसिक आरोही कामीरिता शेर्पाले २३औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । सोलुखुम्बु थामेका शेर्पाले बुधबार बिहान ७ः५० मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा २३औँपटक पाइला टेक्नुभएको आधार शिविरबाट पर्यटन विभाग पर्वतारोहण शाखाका..
सगरमाथा आरोहणको ढोका खुल्यो : ल्होत्से आरोहण शुरु
काठमाडौँ, ३१ वैशाख वसन्त ऋतुको यो याममा ल्होत्से हिमालको आरोहण शुरु भएको छ । इमाजिन नेपालको आरोही समूहले (ल्होत्से–८,५१६ मिटर) हिमालको मंगलबार बिहान सफल आरोहण गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । कूल १२ आरोहीमध्ये पाँच जना डोरी टाँग्ने शेर्पा छन् भने अन्य सात जनामा एक नेपालीसहित चीन, पाकिस्तान र ग्रिसका २\_२ आरोही छन् । विश्वको चौथो अग्ला शिखरमध्ये ल्होत्से चौथो स्थानमा पर्छ ।..
पर्यटकीय क्षेत्र ‘नागछाँगा’ लाई उजिल्याउने प्रयास
भोजपुर, ३१ वैशाख अग्लो छाँगा, ढुङ्गाभरि नागको सेतो चित्र । छाँगाबाट छरर झरेको पानी । वरिपरि हरियाली, चिरबिर चिरबिर चराचुरुङ्गीको आवाज । नजीकै मनमोहक तर, डरलाग्दो गोल्माराजा गोल्मारानी भिर । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल नागछाँगाले सबैको मन लोभ्याउँछ । यो स्थानमा पुग्ने सबैको ध्यान छाँगामा रहेको नागको चित्र मै जान्छ । ढुङ्गा भरि जेलिएको नागको चित्र..
पर्वतारोहण क्षेत्रबाट अहिलेसम्मकै उच्च राजस्व सङ्कलन, सगरमाथा चढ्नेको ओइरो
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८ मि) पछि दोस्रोमा ८५१६ मिटर उचाइमा रहेको लोत्छे हिमालप्रति आरोहीहरूको आकर्षण देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९२ जना पर्वतारोहीले लोत्छेको आरोह गरेका छन् भने यसबाट एक करोड ८१ लाख ४८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । पर्वतारोहीको सङ्ख्यामा बढेसँगै राज्यको राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।..
Results 1048: You are at page 11 of 35